Sacuudi Carabiya - BBC News Somali
Sheekadan qeybteeda ugu muhiimsan waxay ka dhacday hoteel weyn oo ku yaalla magaalada Cannes ee dalka Faransiiska
Trump ayaa hadalkan u sheegay dad uu u khudbeynayay
30 Abriil 2019
Kadib dilkii weriye Jamaal Khaashuqji, waxaa jiray eedeymo xooggan oo loo jeediyay mas'uuliyiinta Sacuudiga
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qoyskii Jamaal Khaashuqji siiyey guri malaayiin doolar ay ku kaceyso.
Sacuudiga oo si ku meel gaar ah u sii daayay dumar
Sacuudiga ayaa si ku meel gaar ah u sii daayay saddex dumar ah oo xuquuqda aadanaha u dooda ku waas oo ku eedaysan dacwado la xiriira u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda iyo in ay xiriir la sameeyeen ajaaniib.
Tiro ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa lagu maxkamadaynayaa Sacuudiga, dacwaddaas oo dhalisay su'aalo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadamaha ee Boqrtooyada Sacuudiga.
Barnaamij muran dhaliyay oo ay 'ragga Sacuudiga ku xakameeyaan dumarka'
Google ayaa wali ka aamusan barnaamij muran dhaliyay
Labo gabdhood oo Sacuudiga u dhashay oo qaylo dhaan diray
Labo gabdhood oo u dhashay Sacuudi Carabiya ayaa dalbaday in la caawiyo kadib markii ay sheegeen in lix bilood ay sharci darro iyo xaalad hubanti la'aan ah ku joogeen magaalada Hong Kong kadib markii ay qoyskooda kasoo baxsadeen.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa war ka soo saartay hadal in muddo ah la isla dhex marayay oo ku saabsan in dhaxal sugaha boqortooyada, Maxamed Bin Salmaan uu doonayo inuu iibsado kooxda Manchester United ee ka dhisan dalka Ingiriiska
Apple oo baaraysa app ay dawladda Sacuudigu leedahay
App ay dawladda Sacuudiga leedahay oo loo adeegsan karo in lagula socdo dumarka lagagana hor istaago safarka ayay baaritaan ku samayn doontaa shirkadda Apple, sida uu sheegay madaxada shirkadda.
Khabiir Qaramada Midoobay ka tirsan oo sheegtay in Sacuudi Carabiya 'ay xannibtay' baaritaanka dilkii Khaashuqji
Warbixin hordhac ah oo ay Qaramada Midoobay ka diyaarisay dilka weriyaha ayaa waxa ay sheegaysa in Sucuudigu uu hor istaagay in galaangal loo yeesho goobta uu dambiga ka dhacay.
Basma Khalifa, oo 29 sano jir ah, waxay ku laabatay halkii ay ku dhalatay si ay u aragto haddii ay halkaasi ku noolaan karto. Balse hal tallaabo oo khaldan oo aad qaaddo waxay la micno tahay inaadan mar kale ku laaban Karin.
Todobaadkan ayey 100 maalmood ka soo wareegatay dilka weriye Jamaal Khaashuqji, dadkuna waxa ay isugu soo baxayeen bannaanka hore ee qunsuliyadda si ay cadaaladna ugu raadiyaan.
Amiir Turki al-Faisal oo kasoo horjeestay in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Suuriya
Xubin sare oo katirsan qoyska xukuma Sacuudiga ayaa kasoo horjeestay in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Suuriya.
13 Jannaayo 2019